Archive du 20180721
Onitiana Realy “Misy manipy hoditr’akondro ny filoha”
Afangaron’ny olona ny mpanao gazety sy ny minisitra. Tany ivelany no natao hiteny, fa rehefa ao anatiny natao hitondra vahaolana.
Hetsika eny amin’ny 13 mey Hotohizana amin’ny talata
Nanao fanambarana miaraka tetsy amin’ny hotely Colbert Antaninarenina omaly ny mpanao politika, sendika, mpianatry ny oniversite, mpampianatra mpikaroka, fikambanana sy vovonana maro fa hamerina ny hetsika etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey ny talata izao.
Imbiky Anaclet “Fifamelan-keloka no tokony himasoan`ireo kandidà”
Mbola maro raharaha tsy manjary eto amin’ny firenena izay mahatonga ny tsy fisian’ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana intsony.
Raharaham-pirenena Samy hafa ny mitantana firenena sy ny fitondrana Fiangonana
Lasa ataon`ny mpanao politika fitaovana ny fiangonana sy ny fivavahana hatramin’izao mba hahafahana mahazo toerana ary misy koa mpitondra fiangonana miditra amin`ny raharaha politika.
Orlando Raobimanana Vondrom-bahoakam-paritra tsara tantana no vahaolana
Nangingina Atoa Orlando Raobimanana teo aloha teo. Nivoaka tamin’ny fahanginany izy manoloana ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny. Nambarany fa mahantra ambony harena i Madagasikara.
Iray tsy mivaky ny FIZAFATO Hankalaza ny faha-40 taona nijoroany
Mitohy ny fankalazana ny faha-40 taonan’ny FIZAFATO (FIkambanan’ny ZAnaky ny FAritany Toliara), ka ny sabotsy 28 jolay izao ny fihaonambe hiaraha-mifaly amin’ny mpikambana rehetra tsy ankanavaka ao amin’ny ANS Ampefiloha, hoy ny mpandrindra ny hetsika dia Atoa Guy Laureny Ramanankamonjy. Manasa ny zanaky ny faritanin’ny Toliara tsy ankanavaka izy izy ireo.
Maitre Willy Razafinjatovo Mety hesorina tsy ho mpisolovava intsony
Tsy mbola nisy nampiakatra Codis ny mpisolovava Willy Razafinjatovo na Olala, hoy ny filohan’ny olafitry ny mpisolovava eto Madagasikara, ny Batonnier Hubert Raharison.
Vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana Fa hampifandrafiana mihitsy ve ?
Mitaky ireo heveriny fa zo sy tombontsoa tokony hositrahany ny mpampianatra, dia rarafana lakrimozenina satria hoe nanao fihetsika nahatezitra ny minisitra Horace Gatien ny takarivan’ny 4 jolay,
Rallye de Mangoro 2018 27 ihany ireo fiara niatrika ny fiaingana omaly
27 ireo ekipazy niatrika ny fiaingana teny amin’ny tsangambaton’ny Maherifo 1947 tao Moramanga omaly zoma 20 jolay 2018 ary nihazo an’Antsirinala toerana nanatanterahana ny ES 1 mirefy 6,65 km tao amin’ny faritry ny orinasa Fanalamanga
Faha-15 taonan’ny Tambohobe Ho marihana amin’ny fivavahana sy rugby ary vakisôva
Araka ny nambaran’ireo tompon’andraikitra ao aminy notarihan’ny filohany, Rabenjamina Willy, teny Motel Anosibe omaly zoma 20 jolay 2018, dia ho marihana amin’ity taona 2018 ity ny faha-15 taonan’ny Tambohobe,
Thb Champions League Malagasy Rahampitso alahady 22 jolay ny andro faha-5 farany
Hifarana rahampitso alahady 22 jolay 2018 amin’ny alalan’ny fantanterahana ny andro faha-5 ny dingana faha-2 amin’ny “Thb Champions League Malagasy 2018” araka ny fandaharana :
Kitram-behivavy Malagasy 2018 Tontosa ny andro faha-4 ny dingana faha-2
Tontosa omaly zoma 20 jolay 2018 ny andro faha-4 ny dingana faha-2 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2018 eo amin’ny baolina kitra vehivavy Malagasy.
Milaza azy fa hanao izay ho afany daholo izay rehetra nambara hatreto fa hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena amin’ny volana novambra.
Mpampianatra sy mpanabe Toy ny efa rangitina mihitsy
Ny fanabeazana sy fampianarana no nolazain’ireo mpitondra nifandimby fa fanoitra ho an’ny fampandrosoam-pirenena. Tao anatin’ny 60 taona nahazoantsika repoblika anefa dia mbola tsikaritra hatrany fa nataon’izy ireo tsinontsinona hatrany ny mpampianatra sy mpanabe malagasy.
Asan’ny dokotera Tena maro mpisandoka
Tahaka ny fanao isan-taona dia notanterahina omaly teny amin’ny Live Hotel Andavamamba, ny « journée des médecins ».
Foraoma ekonomika aty amin’ny ranomasimbe indianina Horaisin’i Madagasikara
Ny 26 ka hatramin’ny 28 septambra izao no hotontosaina eny amin’ny tanàna voara Andohatapenaka ny foraoma ekonomikan’ireo nosy aty amin’ny ranomasimbe indianina na ny FEIOI 2018.
Zava-doza mampivarahontsana Noloarana ny atidohan’ilay lehilahy
Lehilahy iray no hita faty tao Ankiady Andrainjato any Fianarantsoa omaly.
Fandefasana mpiasa mankany Koweit sy Liban Voarara saingy mbola misy ihany ireo minia mikipy sy misoloky
Mbola voarara tanteraka hatreto ny fandefasana mpiasa Malagasy mankany amin’ireo tany Arabo toa an’i Liban sy Koweit. Mbola misy anefa ireo agence deplacement minia mikipy ka maka vola aman’olona sy mampanantena asa tsara be ho azy ireny.
Ny fitanilan’ny fitantanana ara-bola Sakana amin’ny famaliana ny fitakiana sendikaly
Resaka fitanilana sy ny fanaovana ampihimamba ny volam-bahoaka no tena fositra eto, ary tsy voatery hitambezo volabe amina tapitrisa dolara any amin’ny vahiny vao afaka hahavaha ny olana sy ny fitakiana samihafa,
Tontolon’ny varotra sy diplomasia Mila hatsaraina hatrany
Nisy ny fiofanan’ny mpiasan’ny minisiteran’ny varotra notanterahina tetsy amin’ny Hotely Le Pavé Antaninarenina omaly.
Fikambanan’ny mpamboly mitambatra Tsy manaja ny zon’olombelona ny QMM
Omaly zoma 20 jolay no nanao fanambarana tetsy amin’ny Hotely Telozoro Andrefanambohijanahary ny fikambanan’ny mpamboly mitambatra amin’ny kaominina Tolagnaro, Ampasinahampoana ary Mandromondromotsy.
Ady amin’ny famotsiam-bola Lasa sakana ho an’ny SAMIFIN ny lalàna sasany
Ny lalàna lah2004-020 tamin’ny 19 aogositra 2004 izay mifehy ny SAMIFIN hatramin’izao dia manasokajy fotsiny hoe avy amin’iza avy no raisina ny fanambaran’ahiahy.